Ntụgharị uche nke transcendental - WRSP
Ntụgharị uche na-agafe agafe (TM)
Oge ntụgharị uche oge
1918 (?) Onye guzobere Mahesh Prasad Varma (Maharishi Mahesh Yogi) amụrụ.
1955 Maharishi malitere izi ihe na India (n'okpuru aha Bal Brahmachari Mahesh).
1957 E hiwere Ndozi Ime Mmụọ na India.
1959 Maharishi gara leta United States na mbụ.
E hiwere 1960 International Meditation Society (IMS).
1964 Mmụta International Meditation Society (SIMS) hiwere.
1967 Beatles na ndị ọzọ na-atụgharị uche n'egwuregwu wetara mgbasa ozi na TM.
N'etiti-1970s Ọnụ ọgụgụ nke ndị na-atụgharị uche na-amụba nke ukwuu, na-abịarute otu nde na US na nde asaa n'ụwa niile.
E hiwere 1974 Maharishi International University (MIU) na Santa Barbara, California.
1975 MIU (Ugbu a Maharishi University of Management ma ọ bụ MUM) kwagara Fairfield, Iowa.
E webatara 1976 TM "sidhis" (superpowers).
1978-1979 Ọtụtụ puku ndị ọkachamara TM sidhi kwagara Fairfield.
1980-1990s Maharishi webatara ụghalaahia "Vedic Sciences and Technologies."
2008 Maharishi nwụrụ.
2008- ugbu a The TM Movement lanarịrị; nkwado ndị ama ama kwadoro atụmatụ mgbasa ozi ọhụụ.
Maharishi Mahesh Yogi (Maharishi, MMY) bu aha onye guzobere TM Movement. "Maharishi" pụtara "onye amamihe dị ukwuu" n'ime Sanskrit, Mahesh kwenyere na ọ bụ aha enyere ya, na "Yogi" bụ aha ndị India nyere ndị na-eme ọzụzụ mmụọ.
N'ikwekọ na ọdịnala ndị mọnk nke Hindu, Maharishi ekwughị banyere ndụ ọ dịrị ndụ tupu ya ekwe nkwa okpukpe; n'ihi ya, ndị ọkà mmụta agbaala mbọ wuo akụkọ ndụ ya. Ọ bụ ezie na ọtụtụ kwenyere na Maharishi malitere ndụ dị ka Mahesh Prasad Varma na 1918, ọbụnadị nke a ejighi n'aka. A na-enye aha ezinụlọ ya mgbe ụfọdụ dị ka Srivastava, na-atụ aro ọtụtụ ụbọchị ọmụmụ ndị ọzọ.
Ọdịnihu Maharishi gụrụ akwụkwọ physics n'ụlọ akwụkwọ wee gụ akwụkwọ na Mahadum Allahabad na 1942. N'ime oge a, ọ ghọrọ onye na-eso ụzọ nke onye ndu mmụọ ime mmụọ ama ama na onye isi ụka ụka Shri Swami Brahmananda Saraswati (1863-1953), Shankaracharya nke Jyotirmath, otu n'ime mmadụ anọ nnukwu oche ndị mọnk na India. Swami Brahmananda Saraswati, onye ọkà mmụta Brahmin, bụ onye a na-asọpụrụ miri emi dị ka onye nsọ n'oge ndụ ya, aha ya dị ka nwoke dị nsọ ka na-adịgide.
Maharishi abụghị Brahmin. A mụrụ ya n'òtù ndị odeakwụkwọ ketara eketa, ndị Kayastha. Ya mere, site n'ụkpụrụ nke ọdịnala Hindu, e kweghị ka ọ were aha na ọrụ nke guru (ịnye mbido, ịnakwere ndị na-eso ụzọ, wdg), ọ bụ ezie na ọ bụrụ na ọ jụghachi ya, a hapụrụ ya ka ọ kụzie banyere isiokwu ime mmụọ (Humes 2005). Otú ọ dị, ọmụmụ ya dị ka Kayastha mere, ruru eru ka ọ bụrụ odeakwụkwọ onwe onye nke Brahmananda Saraswati, nke a maara n'ime "TM" dị ka "Guru Dev." O jere ozi Guru Dev dị ka odeakwụkwọ ya ihe dị ka afọ iri. N'oge oru nkuzi ya, MMY jiri nlezianya zere akara nke guru, na-ekwu na ọ bụ onye ntinye aka nke nkuzi nke guru nke ya; agbanyeghị, ndị na-eso ụzọ ji okpukpe kpọrọ ihe, ọkachasị ndị ọdịda anyanwụ, sọpụrụ MMY dịka guru n'agbanyeghị.
TM Movement gosipụtara onwe ya n'ihu ọha n'ọtụtụ ụzọ dị iche iche n'ime iri afọ isii gara aga. Na mmalite oge mbụ, Maharishi kụziri n'ime usoro okpukpe na nke ime mmụọ doro anya, dị ka aha o nyere nzukọ mbụ ya, "Ntugharị Ime Mmụọ" (SRM) gosipụtara. Na 1959, mgbe etinyere SRM na California dị ka nzukọ na-enweghị uru 501 (c) (3), akwụkwọ ntinye akwụkwọ ya kwuru, "rationlọ ọrụ a bụ nke okpukpe, ebumnuche agụmakwụkwọ ga-enye (sic) nkuzi na a usoro ntụgharị uche dị mfe, na ụdị ọrụ ebere nke ụlọ ọrụ bụ inye ụzọ dị mkpa maka nkuzi a nye ndị tozuru oke chọrọ ibi ndụ mmụọ karịa, life ”(“ SRM-Incorporation ”).
Nke mbụ SRM rịọrọ ndị otu obere, ndị bara ọgaranya, nke nwere mmasị na mmụọ na-eme nke ọma na Southern California na ọtụtụ ebe ndị ọzọ na US na West (Herrera 2003; Olson 2005). Maharishi gosipụtara onwe ya dị ka onye mọnk Hindu, na-akụzi ụdị ntụgharị uche mantra dị mfe nke ọ sịrị na onye guru ya, "Guru Dev" bufere ya. (Maka ihe ọ bara uru, ụfọdụ ndị nkatọ na-ekwu na MMY mepụtara TM n'onwe ya, ọ bụghị Guru Dev kuziri ya.) Ikekwe n'ihi na MMY gụrụ akwụkwọ na physics na mahadum, site na mbido nkuzi ya, o jiri ntụnyere na ihe atụ. nke sitere na sayensị ndị ọdịda anyanwụ nke oge a; Otú ọ dị, ọdịdị sayensị nke ntụgharị uche abụghị isi ahịa ere TM na mmalite oge a (Lowe, 2011).
Site na mmalite, MMY nwere nnukwu ebumnuche maka ngagharị ya, na-enwe olileanya na omume zuru ebe niile nke TM ga-eduga na mgbanwe ụwa. A kwalitere TM dị ka ihe ngwọta maka nsogbu niile: nke onwe, ezinụlọ, nke obodo, nke mba na nke ụwa. Maharishi kwuru na, n'adịghị ka ụdị ntụgharị uche ndị ọzọ, TM dị mfe, eke, na enweghị mgbalị. Ọzọkwa, omume ya chọrọ ka a ghara ịhapụ ihe ụtọ ụwa ma ọ bụ gbanwee ndụ. Ndị na-atụgharị uche ga-enwe obi ụtọ ma nke mmụọ ma nke ụwa. TM, e kwuru, ga-anapụta "200% ụtọ ndụ." N'ihe dị ka afọ 1960, MMY kwuru na ọ bụrụ na otu pesent nke ndị bi n'ụwa na-eme TM, udo zuru ụwa ọnụ ga-ejide n'aka, na afọ ọhụụ ọhụụ, ịba ọgaranya, obi ụtọ, ahụike, na ogologo ndụ ga-amalite n'ụwa ("Maharishi Effect").
Ka ọ na-erule etiti afọ 1960, MMY ejirila ọtụtụ afọ na-akụzi ihe n’akwụsịghị akwụsị n’ụwa, MMY ghọtara na ọ gaghị ekwe omume ibido ndị mmadụ zuru oke n’onwe ya imezu ebumnuche ya nke udo ụwa. Ya mere, ọ malitere usoro ọzụzụ nke ndị nkuzi TM (akpọrọ "ndị mbido") onye, ​​site na isoro ntuziaka ya na usoro ya, usoro iburu n'isi, ga-eme ka ọnụ ọgụgụ ndị na-arụ ọrụ nke TM mụbaa n'ike n'ike. A kọrọ na Maharishi na-atụ ụjọ na "ịdị ọcha" nke omume TM ga-efu ma ọ bụrụ na ndị bidoro mụọ usoro ntụgharị uche ndị ọzọ ma ọ bụ gere ndị nkuzi aka mgba. TM bu ihe puru iche na uzo zuru oke, o kwuru, ya mere ekwesiri izere nkuzi na ndi nkuzi ozo. Ndi ohuru ohuru binyere aka na nkwa iji “mee ka ozizi ha di ocha,” na nghota nke uzo MMY nyere. Ihe a mesiri ike na nkwenye siri ike na nkuzi nke MMY bụ akụkụ pụtara ìhè nke Transcendental Meditation Organisation (TMO), dịka nkwenye zuru oke na Maharishi nwere nghọta zuru oke na enweghị isi, n'adịghị ka asọmpi gurus.
N’oge na-adịbeghị anya, e nyere ụfọdụ nkuzi nkuzi nkuzi TM na US na India, mana emechara ọtụtụ n’ime ha na Europe. Maharishi gosipụtara obi ụtọ maka ụlọ oriri na ọ Europeanụ Europeanụ ndị Europe, jiri ha maka ọzụzụ ọzụzụ ya na ebe obibi nke ya ruo ọtụtụ iri afọ. Ka ọ na-erule mbido 1970s, njem ya na North America malitere ịmalite, dị ka ndị na-achọsi ike TM bụ ndị bịara Europe maka ndụmọdụ.
Na 1967, Beatles, ọtụtụ n'ime Beach Boys, Donovan, na ndị ama ama ama ama na-atụgharị uche, na-ebute ọtụtụ ọha na eze. Ebuputa mgbasa ozi nke abụọ na 1975 site na ngosipụta telivishọn nke Maharishi na The Merv Griffin Show. Ka TM bịara pụta ìhè, mmegide gbagoro (Goldberg 2010). A na-akwa TM ọchị dị ka fad, ndị nkatọ na-ekwukwa na TM bụ "okpukpe" omume na-agbado na ọha na-enweghị atụ, ụdị ejiji ime mmụọ nke Hindu gbanwere maka West.
The TM Movement, nke a na-akpọkarị "Movement," banyere usoro ọhụrụ na mbipụta 1970 nke otu isiokwu na akwụkwọ akụkọ ahụ Sayensị, na-egosi na omume nke TM mepụtara mgbanwe mgbanwe ahụike na ndị na-atụgharị uche. Isiokwu a na akụkọ a na-akwanyere ùgwù, nke a na-enyocha na ndị ọgbọ, mere akara mgbanwe maka TM. Maharishi ekwuola ogologo oge na ntụgharị uche bụ "sayensị," mana ugbu a ọ pụtara na ọ nwere ihe akaebe. Tupu e bipụta isiokwu a enweghị ụdị ntụgharị uche a mụtara nke ọma; edemede nke mbu mepere uzo mmiri, ma maka TM na mpi usoro ntughari uche. Ọ bụ ezie na ọmụmụ sayensị nke ntụgharị uche bụzi ihe a ma ama, na 1970 nke a bụ ọmarịcha mmepe. Ọtụtụ narị ọmụmụ ndị na-esote gbalịrị ịdepụta ọtụtụ uru bara uru nke ma onye ọ bụla na otu omume nke TM. N'ime afọ iri sochirinụ, Maharishi ji oge dị ukwuu soro ndị ọkà mmụta sayensị ama ama na-akparịta ụka-ụfọdụ ndị na-arụ ọrụ TM na ndị ọzọ na-abụghị TMO. Nzute vidio ndị a gosipụtara MMY na ndị ọbịa ya na-achọ ihe ndị dị n'etiti sayensị ọdịda anyanwụ na TM (ma omume ntụgharị uche na usoro amamihe ya). Ọ bụ ezie na a na-ajụkarị nyocha nke nkwado TMO na-akwado, otu TM na-egosipụtakwa ihe ọmụmụ sayensị na akwụkwọ ya.
Kemgbe 1970, TM ka egosiri dị ka omume sayensị; ihe omimi na okpukpere chi nke TM bu ihe doro anya na nkwuputa ndi mmadu, obu ezie na ha adigidewo odi nkpa na ntuziaka di elu. A na-ahazi nkuzi ihu ọha, eburu ha n'isi, wee gosipụta eserese “sayensị” na eserese gosipụtara iji gosipụta ọfụma nke TM. A na-emezigharị usoro ndị bidoro ma bụrụkwa ihe dịka ebe niile a na-akụzi. Ndị mbido na-agbaso usoro uwe ejiji siri ike: ụmụ nwoke nwere obere ntutu na uwe ejiji; ụmụ nwanyị na-eyi uwe ma ọ bụ sket yiri azụmahịa. Ebube, nkwanye ùgwù n'etiti ndị na-arụ ọrụ, na onye ọrụ na-arụ ọrụ n'ọfịs anọchilarị ụdị omenaala mbụ nke ndị nkuzi Maharishi nke ndị ntorobịa (Lowe 2011).
N'etiti afọ ndị 1970s Maharishi malitere ịnwale usoro omume dị elu ọ kpọrọ "sidhis." (Edere n'okpuru na ngalaba Rituals / Practices) O doro anya na omume ndị a na-eduga na mmepe nke "ndị ike" dị ka clairvoyance, clairaudience, "ike nke enyí," na levitation. TMO jiri echiche sitere na fisiks kwantum kọwaa etu sidhis chere na ọ siri rụọ ọrụ, mana enweghị obi abụọ. N'ịchọ ịkwa emo ọha na eze na ịda mba, TM Movement tụgharịrị n'ime, na-elekwasị anya na mbọ ya na ndị na-eme TM. Emechiri ọtụtụ mpaghara ya. Enyere nkwuputa ohuru na oke nzuko nke "sidhas" (ndi mmadu na-eme sidhis) nke a na-akpo "Nzukọ Udo Uwa," ebe otu omume nke TM na sidhis kwenyere na ha nwere ike siri ike nke omuma ihe, n'ọhịa, ”na-eme ka ikuku dị ọcha, na-emekwa ka esemokwu zuru ụwa ọnụ na-agbasa.
Na 1979, Maharishi kpọrọ Mgbakọ Udo Uwa mbụ nke ụwa, nke na-eme na Amherst, Massachusetts, site na ozi ọma na echiche dị egwu. Hewa nọ na njedebe mbibi, ọ na-ekwu, na naanị TMO nwere ike ịzọpụta ya site na itinye aka na ntụgharị uche otu ụbọchị na omume sidhi. Ọnụ ọgụgụ sidhas buru ibu karị, nke ka ukwuu na mmetụta dị mma ga-adị, ya mere ịchịkọta nnukwu ìgwè n'otu ebe dị mkpa. Maharishi rịọrọ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 3,000 gbakọtara sidhas ka ha gaa ngwa ngwa o kwere omume na Fairfield, Iowa, ụlọ nke Mahadum Maharishi International (nke bụ Maharishi University of Management, ma ọ bụ MUM) iji tụgharịa uche ọnụ wee chekwaa ụwa. N'agbanyeghị ọtụtụ ihe isi ike nke njem a, ihe karịrị 2,000 kwadoro kwagara Fairfield na ọnwa ndị na-abịanụ, ebe ha mere ihe karịrị pasent iri abụọ nke ndị bi n'obodo ahụ. Fairfield agaghị abụ otu (Lowe 2010).
E wuru nnukwu ụlọ abụọ, ọla edo na-ese, ngwa ngwa na kampos iji tinye nnọkọ ntụgharị uche otu nwoke na nwanyị.
Ihe ndozi akụrụngwa ndị ọzọ na campus sochiri. Okwu banyere ọrụ dị njọ. Fairfield na-agbasi mgba ike, akụ na ụba ya enweghị ikike ịmịnye ọtụtụ puku ndị mmụta gụsịrị akwụkwọ nke ọma. N'ụzọ dị mma, sidhas gosipụtara na-echepụta ma na-agbanwe agbanwe, na -emepụta ọtụtụ narị azụmaahịa ọhụrụ. Fọdụ na-adị ogologo oge, ndị ọzọ na-eme nke ọma; ọtụtụ bụ ndị okike dị ịrịba ama, ma ole na ole nwere ike bụrụ iwu na-akwadoghị. N'ime iri afọ anọ sochirinụ, akụnụba Fairfield gbanwere ka ọ ka mma. Iro mbụ dị n'etiti obodo abụọ a dị iche iche ejirila nwayọ nwayọ. Fairfield bụzi ebe obibi nke obodo ndị kasị ukwuu na sidhas na ụwa ọdịda anyanwụ wee bụrụ ebe facto nke TM Movement na North America.
Mgbe iwebata sidhis, Maharishi duru TMO na nduzi "Vedic" na-arịwanye elu, na-enweghị ịjụ itinye uche ya na ọdịdị sayensị nke nkuzi ya. O kwusiri ike na ihe odide oge ochie nke ndị India nke akpọrọ Veda nwere “sayensị nke ndụ” zuru oke. Ozizi Vedic nke ọtụtụ ndị Hindu oge a soro na-emerụ nkwenkwe ụgha, Maharishi kwuru, mana n'ụdị mbụ ha enweghị ndejọ ma na-enye ihe ọmụma zuru oke. Iji mee ka ezi ihe ọmụma a dịghachi ndụ ma chekwaa ozizi ndị a weghachiri eweghachi maka ọgbọ ndị ga-abịa n'ọdịnihu, o kere na ụghalaahịa (ma ọ bụ mgbe ụfọdụ ọrụ akara) ọtụtụ "Maharishi Vedic Sciences and Technologies."
O yiri ka Maharishi ọ̀ na-aghọta sayensị nanị n'ihi na ọ pụtara “usoro ihe ọmụma a haziri ahazi.” (Nke a bụ otu n'ime ọtụtụ ọkọwa okwu ọkọlọtọ nkọwa nke sayensị.) "Maharishi Vedic Sciences and Technologies" are ọ bụghị sayensị nke oge a na-enweta ya ma nwalee ya n'ụzọ siri ike site na usoro sayensị. Sayensị na teknụzụ ndị a, gụnyere ịgụ kpakpando (jyotish) na ojiji yiri ya gemstones, ije (sthapatya veda,) North Indian oge gboo music music (mmmmmmmmmmmmm egwu), ọgwụ (ayurvedic ), ọkụ ọkụ (yagya), na nkuzi ndị ọzọ, bụ ụdị nkwenkwe ọdịnala India na omume ọdịnala agbakwunyere na sayensị.
Maharishi mepụtara netwọkụ nke ụlọ ọrụ dị iche iche iji jikwaa ma ree ọtụtụ ngwaahịa na ọrụ Vedic edenyere aha, sitere na teas na mgbakwunye maka iji kwa ụbọchị na ụlọ ọrụ na-ewu ụlọ na-ewu ụlọ ọhụrụ na azụmaahịa ndị chere ihu ọwụwa anyanwụ ma tinye ihe ndị mara mma nke Maharishi. Maka ndị na-arụ ọrụ TM, ezigbo ngwaahịa na ọrụ ndị a bara uru ma chọọ, n'agbanyeghị oke ọnụ.
Ka TM Movement tụgharịrị na-aga India, ndị mmadụ bi na Fairfield bịara nwee obi ike iji nyocha ọgwụgwọ ahụike zuru oke na usoro ntụgharị uche ndị ọzọ. Site n'ime nke a, ha dara iwu Maharishi ka "idebe nkuzi dị ọcha" wee zute nkatọ dị iche iche. Ndị kachasị njọ, ndị na-atụgharị uche bụ ndị zutere ndị Hindu gurus (nke a na-akpọkarị "ndị nsọ" na Fairfield-na-asụ), na-egbochikarị ịtụgharị uche na ụlọ. Nke a bụ nnukwu ntaramahụhụ maka ndị chụrụ àjà mbụ ha iji kwaga Iowa iji mepụta udo ụwa site na ntụgharị uche otu. N'ikpeazụ, amachibidoro ọtụtụ ndị na-atụgharị uche na domes na ntaramahụhụ ahụ funahụrụ ike ya, ọ gaghịkwa ekwe omume TMO ịkọtara ọnụọgụ sidhas dị mkpa iji mepụta Maharishi Effect. Ikekwe ịmata nke a, TMO chegharịrị n'oge na-adịbeghị anya (dịka nke 2012), na-ekwe ka ọtụtụ ndị chegharịrị echegharị laghachi na domes.
Na 2001, Maharishi Vedic City, obodo ezubere maka TM sidhas, ka etinyere na ala mbu nke otutu kilomita otutu ugwu
Ezi egwuregwu. N'ihe ngosi maka akara ngosi n'okporo ụzọ ya na Sanskrit na Bekee, ụyọkọ ya nke ụlọ Maharishi Sthapatya Vedic, "Vedic Observatory" ya, na nnukwu ụlọ ọrụ nchịkwa nke Global Country of World Peace, Vedic City na-ekwu na ọ bụ ihe atụ nke ezigbo ndụ obodo .
Mgbe ọtụtụ afọ nke mkparịta ụka gasịrị, TMO ahụ na Ngalaba Na-ahụ Maka Ọchịchị na United States nwere nkwekọrịta nke na-enye ha ohere ịkpọta Brahmins na-eto eto na Iowa, ebe ha bi na mpaghara dịpụrụ adịpụ, nke ewusiri ike dị na mpụga Vedic City. Ihe dị ka otu puku Brahmins bi na ụlọ ahụ dịka nke 2012. Ndị na-eto eto Brahmin na-etinye aka oge niile n'ememe ọkụ (yagnas), ememe okpukpe ofufe (pujas) na otu ntụgharị uche / sidhi omume iji wusi mbọ puku afọ nke sidhas na Fairfield. A na-akọ na atụmatụ ga-emegharị Brahmins ọhụrụ na US na oge etiti oge iji dochie ndị ruru ịlaghachi India.
Ka ọ dị ugbu a, Fairfield aghọwo isi nkwụsị na njem njegharị maka gurus si India. Obodo TM sitere n'ike mmụọ nsọ na Fairfield gụrụ akwụkwọ nke ọma na nkuzi Vedic ma nyekwa ala na-eme nri maka ndị nkuzi na-eme ntọghata (Lowe, 2010). TM Movement bụ nke mba niile, yabụ obodo TM dị n'ọtụtụ ebe ndị ọzọ gburugburu ụwa.
Tupu ya anwụọ na 2008, Maharishi abụrụla onye na-atụgharị uche, na-ebi na isi ụlọ ọrụ sthapatya vedic ọ rụrụ na Holland ma na-agwa ndị na-enyere ya aka site na telivishọn mechiri emechi (Williamson 2010: 80). N'ime ogologo ọrụ ya, o mepụtara ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke usoro nhazi, yabụ na ọ na-esiri ndị si mba ọzọ ike ịmata onye na-eme mkpebi maka TMO, ugbu a MMY apụla.
Inekọwapụta nkwenkwe na ozizi maka TM bụ ihe siri ike, n'ihi na ozizi nke TM dị iche na-adabere n'ogo nke mmadụ itinye aka na TMO. N'ebe kachasị dị elu nke nsonye, ​​TM bụ "ndị ahịa ahịa," okwu nkọwa na-anọpụ iche nke ndị ọkà mmụta okpukpe bụ Rodney Stark na William Sims Bainbridge dere iji kọwaa otu okpukpe dị iche iche na-agba ọsọ dị ka azụmahịa, na-enye ndị ahịa nwere mmasị ọrụ (1985). Ọ bụ ezie na ebumnuche kachasị nke ndị otu nzuzo nwere ike bụrụ nke mmụọ na / ma ọ bụ nke okpukperechi, ihu ọha ha bụ nke ụlọ ọrụ ndị na-akwụ ụgwọ na-eme obere ma ọ bụrụ na ndị ahịa ha achọọ, gafere ụgwọ maka ọrụ. Maka nde ndị kwụrụ ụgwọ maka nkuzi na TM ma chọghị itinyekwu aka na otu ahụ, ụdị ahịa ndị ahịa bara uru ma zie ezi. Ndị mmadụ n'otu n'otu na-akwụ nnukwu ego, na-aga n'ememe, ma kuziere ha ịtụgharị uche ọtụtụ ụbọchị. Mgbe ahụ ha nwere onwe ha ime ihe ha masịrị ha, na-enweghị ọrụ ọzọ. Ihe ha kpebiri ikwere bụ ọrụ nke aka ha. Na ọkwa a nke itinye aka, TM bụ usoro maka izu ike; a na-ebelata mgbọrọgwụ okpukpe ya. Dika okwu mmeghe kwusiri ike, ime TM choghi mgbanwe na nkwenye ma obu ndu ndu.
N'ezie, mgbe ndị na-ekwuchitere TMO na-ekwu na TM "abụghị okpukpe" na enweghị usoro nkwenkwe achọrọ, ha na-agwa naanị akụkụ nke eziokwu. Nnabata (puja) bụ nke sitere na isi mmalite ndị Hindu. TMO na-ekwusi ike na ịkpọ ha "Vedic," ọ bụghị Hindu, ọdịiche dị aghụghọ na ikekwe na-eduhie eduhie. Enwere ike ịchọta mantras enyere n'ememe ahụ na ndepụta ndị India oge ochie nke tantric “seed” (bija) mantras, ebe a na-ekwu na ha na-akpọ chi dị ka Saraswati na Rama. Maharishi kụziiri ndị na-eme TM ahụ na mantras ahụ bụ "ụda enweghị isi," ma ọ bụ n'ụzọ ọzọ, "ụda nke amatara mmetụta ya," nke a bụ ihe ha na-agwa ndị mbido ha. Ngosipụta a doro anya dị irè, dị ka eziokwu ahụ bụ na ndị otu nke nnukwu okpukperechi ụwa niile na-eme TM. Ọtụtụ, ma ọ bụ ikekwe ọtụtụ, n'ime ha echeghị na TM na-emegide okpukpe ha. Ọbụna ndị na - ahụ maka TM mgbe ụfọdụ na - egosi na ha amaghị ntọala “okpukperechi” nke ntụgharị uche ha na - akụzi.
Mgbe amalitere ịchụso itinyekwu aka na TM, site na ịga nkuzi ihu ọha, ntụgharị uche obibi na ọzụzụ ndị nkuzi ọmụmụ, na ịzụta usoro ntụgharị uche dị elu na ntuziaka na "sidhis®" (nsụgharị ụghalaahịa TMO nke siddhi, okwu Sanskrit nke pụtara “mba ike”), n’oge na-adịghị anya ha chọpụtara na MMY gbadara nkuzi ya na echiche ụwa niile. Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ndị niile na-atụgharị uche, ndị na-atụgharị uche ogologo oge nakweere usoro nkwenkwe "Vedic" nke Maharishi. A na-ehibe ozizi nke Maharishi na ntọala nke Advaita Vedanta, na-agbakwunye site na nkuzi dị iche iche nke astrology, nkume dị egwu, egwu egwu nke North Indian, Vedic architect, ayurvedic medicine and diet, tinyere ihe ndị ọzọ.
Na nhazi ya kachasị mma, Advaita Vedanta na-eme ka nghọta niile (Brahman) bụ nke ahụ abụghị eziokwu abụọ na-egosi ụwa nke ọdịdị. Onwe (Atman), ezi ndu nke mmadu obula, bu ihe dika Brahman. Ezigbo ihe dị mkpa nke onye ahụ bụ akụkụ na akụkụ nke ihe dị mkpa nke eluigwe na ala, ọ bụ ezie na ọ nwere ike ọ gaghị mara ya. Otu ihe dị mkpa echiche ụwa a bụ nkwenye na ahụ mmadụ bụ microcosm nke eluigwe na ala. Elu ala nke mbara igwe (kpakpando, mbara ala, mbara sara mbara, ụyọkọ kpakpando, na ihe ndị yiri ha) kwekọrọ na usoro ọmụmụ mmadụ ọ bụla. TMO kere tebụl akọwapụtara nke na-edekọ ederede, otu na ibe ya n'etiti ụwa na ime. N'ịga n'ihu, Maharishi na-ekwu na Veda (nke a ghọtara dị ka mkpokọta oge ochie nke ederede Sanskrit gosipụtara na ezigbo ihe ọmụma niile) na-ekere òkè na njirimara a. Edere na ihe odide Vedic nke ọ bụla kwekọrọ na akụkụ ụfọdụ nke ahụ mmadụ na akụkụ dị iche iche nke ụwa. Agbanyeghị na akwụkwọ ozi ndị a nwere ike ịdị ka ihe na-adọrọ mmasị nye ndị na-ekiri ihe na-ahụ anya, ndị na-eguzosi ike n'ihe TM nabatara ha na ihu ọma. A na-asọpụrụ ma na-akwụ ndị ọkà mmụta sayensị n'ime TMO ụgwọ mgbe ha chọpụtara ihe akaebe na-akwado nkwupụta na Maharishi ekwuola kemgbe na ọ bụ eziokwu. Ọmụmaatụ, a TM website na-ekwu na na 1998 “Prọfesọ Tony Nader, MD, Ph.D., [e nyere] ịdị arọ ya na ọlaedo maka nchọpụta akụkọ ihe mere eme na mkpokọta Veda na Vedic Literature, tinyere ndị Devatas niile [Vedic. chi] na mbara igwe dum, di na ihe omumu banyere mmadu nile "(" Maharishi Achievements ").
Teknụzụ ime mmụọ nke Maharishi na-adabere na nhazi nke nkọwa ndị a macrocosmic / microcosmic zuru ezu. Ọ bụrụ na ahụ mmadụ, Veda, na mbara igwe niile ahaziri nke ọma, mgbe ahụ omume ndị emere n'ime ahụ na nghọta mmadụ na-emetụta ebumnuche nke ụwa. Iche echiche mantras abụghị naanị ọrụ onwe onye; nkwughachi uche nke mantras, emezuru nke ọma, na-eweta nsonaazụ pụtara. N'otu aka ahụ, ịme ememe Vedic ga-agbanwe ma usoro ọmụmụ nke ndị na-eme ememe na ebumnuche na-arụ ọrụ nke mpụga ụwa. Site na ọzụzụ zuru oke, ike sitere na mantras na ememe nwere ike iduzi ka ọ baara ndị ọzọ uru, dị ka a hụrụ na Maharishi Vedic Vibration Technology SM na Maharishi Yagyas ® (a tụlere n'okpuru).
N'ime afọ ndị izizi ya, Maharishi ji "Being" dị ka otu okwu Brahman. N’oge na-adịbeghị anya okwu a bụ “ubi dị n’otu,” nke sitere n’ihe ọmụmụ physics, amalitela ịrụ ọrụ ahụ. Amamihe, aghotaghi dika echiche ma dika ihe omuma nke di na nso nso a, dikwa ka Atman. Enlightment, ma ọ bụ nnwere onwe, na-esite na nghọta nke ahụmịhe nke steeti na-abụghị abụọ nke Atman na Brahman (ịmara na ubi dị n'otu) bụ otu. Maharishi na-amalite site na nghọta a bụ isi, nke a na-ekwukarị n'asụsụ na-ada ụda sayensị, ma na-etolite atụmatụ ya nke evolushọn ime mmụọ site na ya.
Dị ka Maharishi si kwuo, ụmụ mmadụ nwere ike ịnweta ọnọdụ asaa nke nsụhọ, mana "nrụgide" (nke yiri ya karma) echekwara na usoro ụjọ na-egbochi ọtụtụ mmadụ ịnweta ọnọdụ dị elu (Campbell 1976). Ka ewepụrụ “nrụgide”, site na usoro ntụgharị uche na ojiji nke “teknụzụ Vedic” Maharishi, ndị kwenyere n’okwukwe ka a na-aga n’ihu site na steeti nke uche. A na-eche usoro a nke evolushọn ime mmụọ n'ụzọ nkịtị ma ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ nke ọma, ọ bụrụhaala na mmadụ agbaso ụzọ a kapịrị ọnụ na-enweghị ntụgharị.
Ọnọdụ atọ mbụ nke nsụhọ, ihi ụra, nrọ, na edemede, bụ ihe mmadụ niile maara. Ọnọdụ nke anọ, mmata transcendental, bụ ahụmịhe n'oge omume TM. A kọwara ya n'ọtụtụ ụzọ ekele: dị ka "mmụọ dị ọcha," dị ka "transcendence," dị ka "mmata na-enweghị isi," wdg. A na-akọwa ya dị ka ọnọdụ zuru oke nke ịmụrụ anya zuru oke, dị iche na steeti atọ ndị bu ụzọ. (Ndị ọkà mmụta sayensị TM nwara, ikekwe nke ọma, iji chọpụta usoro mmekọrịta nke steeti a.)
Ọnọdụ nke ise, "mmụta maka ụwa niile," bụ nke ekwuputara site na ahụmịhe ugboro ugboro nke ịmasị transcendental na ntụgharị uche. N'ikpeazụ, ọnọdụ a gafere "kwụsie ike," nke mere na onye na-atụgharị uche na-enweta nghọta dị ọcha karịa mgbe ọ na-eteta, na-arọ nrọ, ma ọ bụ na-ehi ụra. A na-akpọkwa steeti a dị ka "ịgba akaebe," nke pụtara na ọnọdụ obi ụtọ dị oke mma, dị ka Atman nke Advaita Vedanta, na-ahụ ma ọ bụ ndị akaebe na-arụ ọrụ nke ịmụrụ anya nkịtị, ụra na nrọ. Ndị nkatọ ekwuola na nke a dị ka nkọwa nke depersonalization, ọnọdụ nkewa nke a na-ele anya dị ka ọrịa site n'aka ndị ọkà n'akparamàgwà mmadụ na ndị ọdịda anyanwụ (Castillo 1990). TMO ga-ekwenyeghi, na-ekwu na myirịta ahụ dị elu karịa. A na-ele anya mmụta dị omimi dị ka isi ihe na evolushọn na nghọta zuru oke.
Ọnọdụ nke isii, "Nghọta Chukwu," bụ nke emepụtara site na mmezikwu usoro ụjọ ahụ. Na steeti a, a na-ahụ ọhụụ n'ụzọ aghụghọ, ndị ọkachamara nwere ike ịhụ ụwa, nke gbanwere agbanwe. Maharishi ekwughị ọtụtụ ihe banyere steeti a, nke bụ, na agbanyeghị, nkwụsị ụkwụ nwa oge na steeti nke asaa, ịdị n'otu.
Consciousnessdị n'otu bụ njirimara na-adịgide adịgide nke Atman na Brahman, nghọta onwe onye na ubi dị n'otu. Nke a bụ ihe mgbaru ọsọ ikpeazụ enyere ndị na-atụgharị uche n'otu n'otu, ọ bụ ezie na MMY na-ezo aka oge ụfọdụ gaa n'ihu n'ihu, mmuta Brahman. Mmetụta Brahman dị ka ụdị ịdị n'otu, naanị n'ụzọ ka mma.
Ebumnuche nke ije TM abụbeghị naanị otu onye. Site na mmalite nke mgbasa ozi ya, Maharishi kwuru banyere ịmepụta mgbanwe zuru oke nke ọha mmadụ. O kwenyere na mbụ ma ọ bụrụ na otu pasent nke ndị bi n'ụwa na-eme TM, mmata ụwa ga-ebuli elu ma udo ụwa ga-eso. Ndị na-eso ụzọ ya kpọrọ aha a "Maharishi Effect."
Mgbe iwebata mmemme TM sidhis, Maharishi degharịrị ọnụ ọgụgụ ya, na-azọrọ na square mgbọrọgwụ otu ụzọ n'ụzọ ise nke ndị bi n'ụwa na-eme sidhis ọnụ na nnukwu ìgwè ga-emepụta ikike nwere ike zuru oke iji weta "Oge Ọmụma." (Ọ bụrụ na anyị ejiri atụmatụ ọnụ ọgụgụ ndị bi n'ụwa n'oge na-adịbeghị anya nke 7,067,000,000, mgbe ahụ ndị 8,407 na-eme sidhis ọnụ kwesịrị ịbụ iji mepụta mgbanwe zuru ụwa ọnụ.)
Nkwupụta a na otu omume nke TM sidhis nwere ike ịmepụta ọhụụ ọhụụ bụ ihe atụ nke ihe ndị ọkà mmụta na-akpọ "narị afọ iri na-aga n'ihu," nkwenkwe na a ga-eji nwayọọ nwayọọ weta ụwa n'ọnọdụ izu oke. Agbanyeghị, nkuzi Maharishi anaghị adị mfe ịkọwa; ọ na-ewepụtakwa oge mberede maka ndị na-arụ sidhi na-ezukọta ọtụtụ puku maka Nzukọ Udo Worldwa iji gbochie agha na nsogbu ndị ọzọ na-abịanụ. Ndị ọkà mmụta na-akpọ ụdị mgbochi a nke “mgbochi afọ iri”. Ndị na-eme ihe nkiri TM kwenyere na ọtụtụ ọdachi egbochila nzukọ ntụgharị uche nke otu n'ime afọ iri anọ gara aga. Ọ bụ ezie na Maharishi (1976) kwupụtara ugboro ugboro na "Age of Enlightenment" amalitelarị, ihe akaebe nke narị afọ iri a nke udo, ọganihu, na obi ụtọ egosila na ọ siri ike ide.
N'ezie, usoro a bụ TM, nke a na-akụzi site na puja nke onye mbido na-akpọ oku ma na-enye onyinye nye ọdịnala dị ogologo nke ndị nna ime mmụọ na-eduga na guru Maharishi bụ Swami Brahmananda Saraswati. (Puja ka Guru Dev na “Omenala Dị Nsọ” nyere bụ ntuziaka dị elu.) Ebido n'ezie n'ime TM na-ewe ihe na-erughị otu awa ma kọwaa ya ugboro ugboro na mgbasa ozi na ịntanetị. Ọ dị mfe. Ibute ụzọ na-eweta mkpụrụ osisi, okooko osisi na akwa aka ọhụrụ na emume a. A na-ewepụta ihe ndị a tupu eserese nke Guru Dev, n'oge obere Sanskrit na-ewe nkeji ise ma ọ bụ karịa. Onye mbido ahụ na-emegharị ahụ maka onye bidoro ikpere n'ala n'ihu onyinyo nke Guru Dev ma na-eme ka mantra ahụ jiri na ntụgharị uche. A gwara onye bidoro ka ọ na-emegharị mantra ahụ nwayọ nwayọ, na-eche naanị n'echiche ya. A na-enyezi ntuziaka ndị ọzọ na ebumnuche nke ijide n'aka na usoro ntụgharị uche na-adịgide. A gwara ndị mbido ọhụrụ ka ha tụgharịa uche nkeji iri abụọ ugboro abụọ n’ụbọchị ma laghachi kwa ọnwa ole na ole maka “ịlele” oge, iji hụ na usoro ahụ ka na-agbaghị mbọ. Maka onye ntụgharị uche ọhụrụ, TM kwa ụbọchị bụ naanị usoro akwadoro.
Ọ bụrụ na onye na-arụ ọrụ TM chọrọ itinyekwu aka na ya, nwanyị ahụ nwere ike ịmalite iji usoro dị elu ma ọ bụ "usoro obibi". A kụziiri ọtụtụ usoro dị iche iche dị elu site na afọ; ọtụtụ gụnyere itinye mkpụrụ okwu na mantra onye ntụgharị uche nyere na nnabata. Ọ bụ ezie na usoro ndị a bụ ihe nzuzo, a kọwara ha nke ọma na ọtụtụ weebụsaịtị. Usoro ọmụmụ ihe bụ ebe mgbaba ime mmụọ emere na akụrụngwa nke TMO nwere ma ọ bụ gbaziri ya nke na-enye ohere maka ntụgharị uche, izu ike, na omume hatha yoga dị mfe. Ndị ndu ezumike na-enyekarị nkuzi ihu ọha ma gosi vidiyo vidiyo nke Maharishi.
N'otu aka ahụ, usoro sidhi, usoro izizi nke TMO, ka a kọwara nke ọma na saịtị Internetntanetị. A na-eme sidhis ahụ site na iji uche na-ekwughachi okwu na nkebi ahịrịokwu na anya mmadụ mechiri na ọnọdụ ịgbachi nkịtị ruru mgbe ntụgharị uche. Operatingkpụrụ ọrụ bụ na echiche na-esikwu ike mgbe uche adịghị nwayọ, yabụ iche echiche ndị a na mmụọ dị jụụ ga-eme ka ha dị adị. Nke a ga-ekwe omume n’ikpeazụ n’ihi na “aha na ọdịdị,” okwu na ihe ndị ha kpọrọ, bụ ihe ha kweere bụ otu. Okwu nwere ezigbo ike maka Maharishi, dị ka ọ dị maka ọtụtụ ndị Hindu na-eche echiche. Okwu na nkebi ahịrịokwu ndị eji mee ihe a ("enyi," "ọmịiko," "obi ụtọ," "ike elephant," wdg) yiri ka edegharịrị ya na mbipụta Bekee nke Patanjali's Yoga Sutras (echere na e dere ya n’agbata afọ 200 TOA na 200 OA). Ozugbo a gwara ndị na-atụgharị uche na sidhis, a gwara ndị na-atụgharị uche ka ha na-eme ha ugboro abụọ kwa ụbọchị mgbe ha tụgharịrị uche mgbe niile. Na mpempe akwụkwọ edepụtara ede pere mpe, usoro ihe omume sidhi niile na-ewe ihe dị ka otu awa iji wuchaa ya. Ọ bụ ezie na ụfọdụ ndị ọrụ belatara oge ha belata, ndị ọzọ na-etinye ihe karịrị awa atọ ugboro abụọ kwa ụbọchị na-eme “mmemme” ha.
Dịka nkwupụta dị n'azụ Maharishi Effect, ntụgharị uche nke otu dị oke ike karịa omume naanị ya, yabụ a na-ekwusi ike na ịmepụta otu ntụgharị uche, ma ọ bụ nwa oge, dị ka Nzukọ Udo Worldwa, ma ọ bụ na-adịgide adịgide, dị ka ọ dị na Fairfield na obodo ndị ọzọ TM. Ọtụtụ ndị bi na mpụga TM ga-eleta ha na ezumike iji nye aka na mmetụta otu.
Maharishi, dị ka ọtụtụ ndị nkụzi ime mmụọ nke India, tinyere uru dị ukwuu na alụghị nwanyị, ebe ha matara na ọ bụ ihe siri ike ire na West. Na 1981, o guzobere otu ndi otu ndi nwoke na nwanyi - "Nne nke Chukwu" maka umu nwanyi na "Purusha" maka ndi nwoke-ndi na-enye ndi mmadu ndi mmadu aka dika ndi na-eche echiche di na nwunye. Ọ bụ ezie na ọ bụghị ọchịchọ nke ọtụtụ ndị na-arụ ọrụ TM, ụdị ndụ ndị mọnk na-ebi bụ nhọrọ maka ndị kachasị nwee nsogbu. Obodo ndị nne nke US nke nne na Purusha dị ugbu a na Iowa, West Virginia, na New York State, ọ bụ ezie na ha akwagala ọtụtụ oge n'ime afọ iri atọ nke ịdị adị.
E nwere ọtụtụ ngwaahịa na ọrụ, nke sitere na ọdịnala ọdịnala India ma ọ bụ omume okpukpe nke India, nke na-elekwasị anya ma ọha mmadụ ma ndị na-eme ihe gbasara TM. Ha niile dị oke ọnụ ma e jiri ya tụnyere onyinye yiri ya sitere n'aka ndị nkuzi India ndị ọzọ. Anakwere ha, ha na-ebi ndu zuru oke. Yagyas, emume ọkụ nke Vedic nke ndị ụkọchukwu Brahmin duziri na India, kwenyere na ha na-emetụta mmetụta dị ike na ndụ ndị ahịa. Achọghị ka ndị a na-erite uru ma ọ bụ na-atụ anya ka ha nọrọ maka ememme ahụ, n'ihi na anaghị atụ anya ike ha site na anya. Maharishi Vedic Vibration Technology SM bụ usoro ọzọ nke usoro ọgwụgwọ a na-enye dị ka ndị ahịa ahịa nzuzo maka ọha na eze site na TMO. Na nke a, onye na-agwọ ọrịa ji nwayọ na-agụ mantras mgbe ọ na-afụ mmiri n'akụkụ akụkụ ahụ onye ọrịa a na-agwọ, si otu a na-ebunye ume ọrụ.
Dị ka ọtụtụ ndị South Asians, Maharishi bụ onye na-akwado jyotish (nke a na-akpọkarị "Hindu astrology"). Maharishi Vedic Astrology consultations dị n'ụzọ dị ịrịba ama nke ọma na nkọwa zuru ezu. Ndị na-agụ kpakpando na-arụ ọrụ maka TMO na-ekwukarị Maharishi Vedic Yagyas iji gbochie nsogbu na-abịanụ ma kwado usoro ọgwụgwọ Maharishi Ayurvedic dị iche iche iji meziwanye ahụike, ebe ọ bụ na a kwenyere na mmemme ndị a niile na-arụ ọrụ.
Maharishi Ayurveda mere mkpọtụ mgbe ebutere ya, ma ayurveda ka dị ọhụrụ na ọha mmadụ na West. N'ihe ka ukwuu, nsụgharị Maharishi dị iche na omume ayurvedic ọdịnala dị na India. Ọ bụrụ na ihe ọ bụla, ọgwụ ndị e ji mee ihe na Maharishi Ayurveda dị ka ihe dị nro karịa ma dị nchebe karịa ụfọdụ n'ime ogige ayurvedic na-enyo enyo mepụtara na India. N'ime afọ ndị na-adịbeghị anya, ndị asọmpi na-adịchaghị ọnụ ejirila ahịa dị mma nke Maharishi Ayurveda nwere.
Ọ bụ ezie na ọ dịka ụda “Ọgbọ Ọhụrụ”, iji ọkụ na nnukwu nkume maka ọgwụgwọ bụ, n’ezie, omume ndị India oge ochie. TMO na-enye Maharishi Light Therapy na Gems®, nke ya nwebisiinka mbipute.
Maharishi Gandharva Veda music yiri ka ọkọlọtọ North Indian oge gboo music, a ngwaahịa nke ochie mmekọrịta n'etiti Persian Sufis na Indian egwú, dị ka e kwuru site Cynthia Ann Hume (2008). Maharishi na-ekwu na egwu a bụ ihe ochie na ihe mejupụtara ma bụrụ nke zuru ụwa ọnụ. Ige ntị na ragas edepụtara na oge kwesịrị ekwesị nke ụbọchị ekwenyere na ọ ga-eweta nkwekọ na obi ụtọ dị ka nke emere n'oge ochie India mgbe mmepe nke Vedic nwere obi ụtọ "Eluigwe n'elu ụwa" (Mmemme Maharishi).
Sthapatya Vedic ije bụ ma eleghị anya ngosipụta kachasị pụta ìhè nke Maharishi's Vedic Science and Technologies, opekata mpe na mpaghara ebe ndi oru TM na-etinye uche. Enwere ike ịmata ụlọ Sthapatya Vedic site n'ọtụtụ atụmatụ: ihu niile nwere ihu ọwụwa anyanwụ ma nwee a kalash (dome) n'elu ebe etiti. Ọtụtụ enweghị windo ma ọ bụ ibo ụzọ n'akụkụ ọdịda anyanwụ. A na-ewu ụlọ ndị ahụ site na ihe ndị sitere n'okike ma na-agba ya gburugburu na-agba ume iji gbochie ume ike. A na-elezi anya nke ọma ịchọta ebe obibi dịka ụkpụrụ nke vastu (okwu Sanskrit nke dika okwu China feng shui). Dị ka Maharishi si kwuo, ụlọ obibi kwesịrị ekwesị, nke kwesịrị ekwesị, ma wuo ga-ewepụ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ nsogbu niile nke ndụ kwa ụbọchị ma hụ na ahụike na nkwekọrịta maka ndị bi na ya. Ihe ọ bụla bara uru nke mmụọ nke ụlọ ndị a, ọ dị ka ọ dị mma ma maa mma (Lowe 2011).
Nhazi nke TMO bu ihe ohuru na nke doro anya. N'ime ọtụtụ iri afọ, Maharishi kere ma ọ bụ kpalite mmụọ dị ịtụnanya nke ụlọ ọrụ azụmaahịa na ụlọ ọrụ na ụlọ ọrụ na-enweghị uru, ọbụlagodi otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị nwere ngalaba na mba 74, nke ọ bụla nwere usoro ndu ya. Ndi ndu nke ndi otu a di iche-iche bu ndi mejuputara n'ime ime Maharishi, ya mere na ndi mmadu ole na ole na-ejide otutu ochichi otutu, otutu ndi otu nwere onwe ha jikotara aka na TMO. Nye ndị na-ekiri ihe na-emenụ, TMO nke oge a nwere ike ịdị ka azụmahịa dị iche iche nke ukwuu karịa mmegharị mmụọ, ọ bụ ezie na ndị nọ n'ime ya ọ bụ nke ikpeazụ.
MMY yiri ka ọ na-achịkwa TMO n'ụzọ zuru oke n'oge ndụ ya, na-eme ka nkọwa zuru oke ma na-ejide alaeze ahụ na ikike ime mmụọ ya na-enweghị mgbagha. Site na ọnwụ ya, TMO yiri ka ọ na-ekewapụta na ngalaba mpaghara nwere ọtụtụ ikike na ikike.
N'ọtụtụ ihe n'ime iri afọ ole na ole gara aga, Maharishi mere ka ndị na-eso ụzọ ya dị ọcha bụ ndị pụtara ìhè na ha ga-abụ ndị na-anọchi ya. Ndị a kacha mara amara bụ Deepak Chopra na Sri Sri Ravi Shankar. Chopra na Shankar agawala ịmepụta alaeze ime mmụọ na azụmaahịa nke aka ha. Ihe kpatara achụpụ ndị a apụtaghị nke ọma; nghọta adịghị mgbe ọ bụ àgwà ndu nke Movement. Ndi ochichi masiri abiala ma gafee otutu afo n’enyeghi nkowa. O yiri ka ọ ga - ekwe omume na MMY chere ụfọdụ “ikike” nke ụfọdụ ndị na - eso ụzọ ya na - eduga wee chụpụ ha. Ikekwe na-egosipụta nchegbu a, ndị isi Maharishi mechara hapụ TMO amataghị ya maka ndọta nke onwe ya ma ọ dị ka ọ dọtara ndị na-eso ụzọ onwe ha.
N'ịkọwa okwu ọzọ, tupu ọnwụ ya Maharishi kpuwere ọtụtụ ndị eze iri na abụọ (rajas), onye ọ bụla n’ime ha nwere ikike ịchị otu mba ma ọ bụ karịa. Na tiori, Tony Nader, onye Lebanọn MD, Ph.D. onye Maharishi kpuru okpu dika Maharaja Adiraja Raam Nader (Onye isi ochichi Primary King Rama Nader), kwesiri ibu onye ndu uwa nke TMO. Ekwuwapụtara ya ịbụ onye ọchịchị nke eluigwe na ala yana eze kachasị elu nke na-elekọta rajas ndị ọzọ nke Maharishi, mana o doghị anya ikike o nwere n'ezie. Ndị ikwu Maharishi yiri ka ha na-agba mgba maka ịchịkwa TMO na India (Ray 2012). Dr. John Hagelin, onye ọkà mmụta physics nke Harvard, bụ raja maka "Invincible America," bụ isi nke ọtụtụ ụlọ ọrụ TMO, onye isi oge atọ nke Natural Law Party maka onye isi ala nke US, na n'ezie otu n'ime ndị isi kachasị ike nke Mmegharị na North America. Bevan Morris, onye isi ala nke MUM na Prime Minista nke Global World of World Peace, n'etiti ọtụtụ ọrụ ndị ọzọ, yiri ka ọ bụkwa onye isi egwu.
Ihe ịma aka ndị TMO chere ihu gụnyere ajụjụ banyere ịchịisi ogologo oge (nke a tụlere n'elu). Ndị ọkà mmụta mmekọrịta ọha na eze achọpụtawo mgbe mgbe na ndị isi okpukpe ọhụrụ na-adabere na ndị isi na-adọrọ adọrọ na-adịkarị mfe mgbe ndị guzobere ha. Maharishi yiri ka ọ hapụrụ nzukọ na-arụ ọrụ ego, mana nke siri ike, gbasaa, na nhazi nke nzukọ nwere ike bụrụ ihe siri ike maka onye ndu ya ugbu a ijikwa. Enweghị ọhụụ na enweghị ikike nke otu onye ndu dị ike, nzukọ a nwere ike ịtụ anya ịlụ ọgụ. Agbanyeghị, ruo ugbu a, TMO dị na US yiri ka ọ na-amalite atụmatụ ọhụrụ site na iji ume ọhụrụ, na-ejikwa nkwado ndị a ma ama iji bulie ọhaneze elu. Ihe ngosi David Lynch bu ihe puru iche na nke a, na-eduzi otutu ihe ndi na-achikota ego ma na-agbagha ihe kariri ndi mmadu 200,000 muta TM n'ime afọ ole na ole gara aga (Orsati 2012). N'ebe Ọdịda Anyanwụ, TMO yiri ka ọ na-adịgide ndụ nsogbu nke ọnwụ nke onye guzobere ya nke ọma; Otú ọ dị, akụkọ mgbasa ozi na-egosi na ihe ndị Maharishi nwere na India nọ n'ọchịchị (Ray 2012).
Na-ekwu na usoro TM bụ omume crypto-okpukpe na-aga n'ihu na-eweta nsogbu maka Movement, ọkachasị ka ọ na-agba mbọ iji kụzie ntụgharị uche n'ụlọ akwụkwọ, azụmaahịa, ndị agha, na ụlọ mkpọrọ. N'ezie, TMO na-ekwusi ike na TM na omume ya metụtara ya bụ sayensị, ọ bụghị okpukpe. Ma ozizi ime mmụọ nke TM na Maharishi bụ "okpukpe" maka ndị na-atụgharị uche n'otu n'otu dabere n'ụzọ dị ukwuu na nraranye ha nwere na usoro ihe mgbakwasị ụkwụ na omume ndị dị elu. Mgbe ị na-ele anya na TM Movement n'ozuzu ya, nkọwa dị oke mkpa. Sayensị na okpukpe bụ okwu abụọ nwere ọtụtụ nkọwa na nkọwa ịtụnanya dị iche iche. Site na nkọwa nke okpukperechi, usoro nkwenkwe na omume ndị a kapịrị ọnụ nke ndị na-eme ihe siri ike nke TM pụtara n'ụzọ doro anya dị ka "okpukpe," na-eme ka TMO bụrụ òtù okpukpe ọhụrụ. Site na nkọwa ndi ozo ha adighi. Otu okwu nkọwa ahụ na-ebilite mgbe ị na-enyocha nkuzi Maharishi dị ka "sayensị". N’enyeghi nkọwa zuru oke nke “okpukpe” na “sayensị,” nkwupụta niile banyere "ezigbo" ọdịdị nke TM ga-abụrịrị ọgụ.
Okwu ikpe nke 1979 Malnak v. Yogi kpebiri na "Science of Creative Intelligence," usoro na echiche nke ntọala TM nke TMO na-enye iji tụgharịa uche ụmụ akwụkwọ nọ na New Jersey abụọ ụlọ akwụkwọ sekọndrị, bụ n'ezie okpukpe na okike . Ọ bụ ezie na ọ bụghị mgbe niile ka ụlọikpe ga-abụ ndị ikike kacha ruo aka ịza ajụjụ banyere okpukpe, mkpebi ha na-ebu ibu ma na-esetịpụ ụkpụrụ iwu. N'iburu mkpebi ụlọ ikpe ahụ na eziokwu ahụ na omume na ọrụ ndị a na-ere nke TMO na-ele "okpukpe" anya nye ọtụtụ ndị na-ekiri ya, agbanyeghị na ha na-akọwa okpukpe, TMO na-alụ ọgụ dị egwu.
Puja rụrụ n'oge emume nnabata na mantras ejiri na TM bụ ndị a na-ahụkarị na India ịkpọ ndị Hindu gurus na chi (devas) n'otu n'otu, mana ọtụtụ ndị na-atụgharị uche ọdịda anyanwụ kwenyere na emume a bụ ihe nkịtị na mantras ịbụ "ụda enweghị isi. ” Dika ekwurula okwu a, o doro anya na omume nke TM bu "okpukpe" maka otutu ndi na-eche echiche, n'agbanyeghi otu o nwere ike isi gosi ndi n'èzí. TMO na-ekwusi ike na TM kwekọrọ na omume nke okpukperechi niile, na ọtụtụ nde ndị na-atụgharị uche, na-agbaso ọtụtụ okpukpe ụwa, jiri ezi obi kwenye na nke a bụ ikpe. Mgbe ndị rabaị ndị Juu, ndị ụkọchukwu Protestant, na ndị ụkọchukwu Katọlik na-ekwu na omume nke TM anaghị emegide nkwenkwe na omume okpukpe ha, na, n'eziokwu, emeela ka nghọta okpukpe ha, nkwenye, na okwukwe ha dịkwuo mma, nkwupụta ha kwesịrị iwere na uru bara uru . Ha na-egosi ihe mere ha na eziokwu ha. N'ezie, nke a abụghị akụkọ niile.
Nkwenye dị elu na ntinye aka nke ndị na-aga n'ihu n'ụzọ TM, na-agbaso usoro dị elu, ịga ọzụzụ ndị nkuzi, na-alaghachi azụ, na ịkwaga n'obodo ndị TM lebara anya na-egosi oke ọkwa dị omimi nke itinye ego dị adị. Onye nleta na Fairfield, Iowa, Maharishi Vedic City dị nso, ma ọ bụ obodo ndị ọzọ TM ga-ahụ na, na omume, nkuzi Maharishi nwere ike, ma mee, na-enye usoro ndụ zuru oke, nke na-edepụta ihe niile, na-eri ihe niile maka ọtụtụ puku ndị na-eso ụzọ ya. . Maka ndị ọrụ a nke TM, ntụgharị uche, sidhis, na ọtụtụ ọrụ na ọrụ metụtara ya bụ ụzọ ime mmụọ zuru oke, "nchegbu kachasị", ma ị kpọrọ ya okpukpe ma ọ bụ na ị kpọghị ya. N'ime mmekorita ya na ndị na-atụgharị uche na-etinye aka na TM, Movement nwere ike ịchịkwa na enweghị ndidi nke mgbanwe, na-agba ume echiche ọdịnala na ịmanye orthopraxy. Site n'ụkpụrụ dị ukwuu, TM na-ele anya ma na-akpa àgwà dị ka òtù okpukpe ọhụrụ, ma ọ dịkarịa ala maka ndị na-eso ụzọ ya ji okpukpe kpọrọ ihe.
Ndị nkatọ na-ajụkwa nzọrọ na omume nke TM bara uru mgbe niile. N'adịghị ka ihe akaebe na-enwu gbaa na weebụsaịtị weebụsaịtị, ọmụmụ ihe ọmụmụ 1980 German na-atụ aro na ndị na-aga n'ihu na-eme omume TM ruo ọtụtụ afọ na-egosi obere nkwụsi ike nke uche karịa ndị na-abụghị ndị na-atụgharị uche na ha. Ọmụmụ ihe a dị oke mkpa, dị ka ọtụtụ ọmụmụ ihe dị mma nke ndị na-atụgharị uche, enweghị otu njikwa, ya mere, nchọpụta ahụ abụghị ihe zuru oke. Ọnụ ọgụgụ nke ndị na-atụgharị uche na-amụ amụ dị obere (n = 27), yana nke ahụ, na-eme ka usoro a dị elu karịa ọnụ ọgụgụ. Ọ bụ ezie na ọmụmụ ihe ahụ na-egosi na ụfọdụ ndị na-atụgharị uche ogologo oge anaghị egosipụta ahụike uche zuru oke, ọgụgụ isi ha tupu ha amalite TM amaghị, yabụ na ọ gaghị ekwe omume igosi na TM bụ ihe kpatara ọnọdụ ha ugbu a. A na-echekwa akụkọ ahụ niile na ịntanetị ("Mmetụta Dị Iche Iche Na-ebili na Omume nke Ntụgharị Uche Transcendental" 1980). Ọ bụ ezie na ọmụmụ ihe a adịghị mma, ọtụtụ ndị na-ekiri ihe nkiri ahụ ekwuola na TMO na-akọwapụta nsogbu nsogbu uche nke na-ebili maka ụfọdụ ndị na-atụgharị uche. Maharishi kwusiri ike na TM nwere ike ibute ndị na-esighi ike ma ọ bụ ndị nwere ike ibute, n'agbanyeghị ihe akaebe na-abụghị. Ihe omuma ihe omuma a na-egosi ngwa ngwa na TM, na ichegharị uche ntụgharị uche na omume ndị dị elu, nwere ike inwe mmetụta na-emerụ ahụ na pasent a na-amaghị ama nke ndị ọkachamara TM. Mgbe ndị na-atụgharị uche na-enwe nsogbu nke uche, azịza TMO ndị ọchịchị yiri ka ha adịghị arụ ọrụ. Maka naanị otu ihe atụ, lee akụkọ Antony Barnett banyere ogbugbu mmadụ na MUM (Barnett 2004).
Ọ bụghị naanị na TMO kwesịrị ịkwụsị ebubo ịbụ okpukpe, ọ dịkwa mkpa ịgbachitere onwe ya megide ebubo na-emegiderịta onwe ya bụ naanị azụmahịa na-enye ego na ọ bụghị mmụọ ma ọlị. N'ime afọ ndị a, Maharishi dugara TMO ka ọ nwee nnukwu akụ na ụba gburugburu ụwa. Ọ bụ ezie na a na-enwetakarị ihe ndị ahụ mgbe a na-azụkọta ego maka ego maka nzube ụfọdụ, dị ka iwu ụlọ ọhụrụ, ụlọ akwụkwọ, ogige ntụrụndụ, ụlọ obibi, na “obí eze udo,” ọtụtụ n’ime ọrụ ndị a amalitebeghi, ma obere nke ha mechara. Ego a rụpụtara maka ọrụ ndị a adịkarịghị ma ọ bụrụ na ọ laghachitere ndị nyere onyinye, ọ yikwara ka ọtụtụ ala a zụrụ maka ọrụ agbahapụ hapụrụ n'ime pọtụfoliyo TMO. N'ihi ya, a na-eche na ngalaba dị iche iche nke TMO nwere nnukwu ala (Fowler 2003). Dabere na onye nta akụkọ India bụ Shantanu Guha Ray (2012), ụlọ ọrụ Maharishi dị iche iche na India nwere ihe ruru ijeri dọla iri na otu (US)! Ulo oru ahia di iche iche di n'okpuru aha Maharishi emeela ego di egwu, obu ezie na ego ha emegheghi ka ndi mmadu nyocha.
Ntughari nke TMO na ochichi ụwa na-ewetakwa nchegbu. Dika egosiputara n'elu, otutu ndi otu TM nwere aha na ndi ochichi (dika. World Plan Executive Council, World Government of the Age of Enlightenment, Global World of World Peace, wdg.) Aha ndị a adịkarịghị na mberede. Mgbe ị tụlere utu aha MMY nyere ndị ọkachamara tozuru oke na ndị isi otu ndọrọndọrọ, dị ka Gọvanọ (maka ndị mbido na-eme sidhis), ma ọ bụ Raja (maka ndị ugwu TM dị elu), yana mbọ TMO mepụtara nzukọ ndọrọ ndọrọ ọchịchị ụwa (Natural Iwu Iwu) na mgbazinye kwurula “Micro Kingdoms” n'ime mba ndị na-emepe emepe, usoro a doro anya. TMO emeela ego nke aka ya (Raam), nke ọ nwara iji mba ụwa. Ọ bụ ezie na o yikarịrị ka a ga-aghọta okwu Maharishi banyere ọchịchị ụwa n'ụzọ ihe atụ, yana ọchịchị na-ewere ọnọdụ naanị "n'ogo nke nghọta," ebumnuche TMO welitere nku anya n'ụwa niile.
Ikekwe esemokwu kachasị emetụta ụlọ ọrụ TMO banyere ọnọdụ ibi ndụ nke otu puku ma ọ bụ ụmụ nwoke Brahmin na-eto eto bi n'ime ogige ewusiri ike, nke dị n'ebe ugwu nke Fairfield. A kpọtara ụmụ okorobịa ndị a na US iji tụgharịa uche ma duzie emume oge niile, na ebumnuche nke ịkwalite Maharishi Effect nke emepụtara na ụlọ ndị edo edo. Ihe na-akpata esemokwu a, na-emegide nkụkọ mmụọ, bụ na ụmụ okorobịa nọpụrụ iche n'ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ mmekọrịta niile na mpụga ụwa. Ndị nkatọ na-ebo ebubo na a na-ejide ndị ikom ahụ na nzuzo na, n'eziokwu, na-ejide onwe ha n'ụzọ nkịtị, ọ bụ ezie na ọ ga-abụ afọ ofufo, n'ụdị ịgba ohu. N'ikwekọ n'emeghị nghọta zuru oke, TMO abịabeghị na nkọwa.
Ruo ihe karịrị afọ iri ise, TMO egosila ikike iji gbanwee ozi ya na oge ọhụụ na ndị ọhụụ ọhụrụ. Ma nka ahụ sitere n'aka onye guzobere ya ma ọ bụ nzukọ ahụ n'onwe ya kwesịrị ịpụta ihe n'afọ ole na ole sochirinụ. Ngwaahịa TMO bụ isi, Ntugharị Na-atụgharị uche, adịgidela n'ọtụtụ nrịgo na mgbada na ewu ewu ma na-eche nnukwu asọmpi ugbu a karịa mgbe ọ bụla ọzọ. Otú ọ dị, izu ike na udo nke obi adịkarịbeghị mkpa. Site n'iji nkà na nkwupụta pụrụ iche na enweghị mgbalị, TM nwere ike ijigide ụlọ ọrụ pụrụ iche n'ọma ahịa nke mmụọ ruo ọtụtụ afọ na-abịa. N'otu aka ahụ, ọtụtụ ọrụ ndị ahịa TMO yiri ka ọ na-adịgidekwa. Otú ọ dị, a na-ahụkarị agba ntụ nke siddha na Fairfield na obodo ndị ọzọ TM, na-ahapụ ọdịnihu ogologo oge nke TMO dị ka usoro okpukpe ọhụrụ nwere ike ịjụ ajụjụ.
Ezigbo, Antony. 2004. “Nsogbu na Transcendental Paradaịs dịka Ọnwụ Na-akpata Mahadum Maharishi.”Onye na-ahụ, Ka 1. Nweta site na http://www.guardian.co.uk/world/2004/may/02/usa.theobserver na 20 April 2013.
Campbell, Anthony. 1976. TM na ọdịdị nke ịma ọkwa. New York: Mgbaba na Egwuregwu.
Castillo, Richard J. 1990. "Nkọwapụta na Ntụgharị Uche." Isi mgbaka: Usoro mmekọrịta mmadụ na usoro ndu ya 53: 158-68.
de Herrera, Nancy Cook. 2003. Ihe niile ị chọrọ bụ ịhụnanya. San Diego: odtù Jodere.
Fowler, Jimmy. 2003. “Guru ala na ụlọ.” D Magazin, September 1. Nweta site na http://www.dmagazine.com/Home/2003/09/01/The_Real_Estate_Guru.aspx na 18 April 2013.
Hume, Cynthia Ann. 2008. "Maharishi Ayur-Veda." Pp. 309-32 na Oge Aurveda nke Oge a na nke ụwa: Pluralism na Paradigms, Ndị Fredrick Smith na Dagmar Wujastyk dere. Mahadum State nke New York Press.
Hume, Cynthia Ann. 2005. "Maharishi Mahesh Yogi: E wezụga TM Usoro." Pp. 55-80 n'ime Gurus Na America, nke Thomas Forsthoefel na Cynthia Ann Humes dere. Mahadum State nke New York Press.
Lowe, Scott. 2011. "Ntụgharị uche nke transcendental, Vedic Science, na sayensị." Nova Religio 14: 54-76).
Lowe, Scott. 2010. "Ngbanwe mbu nke Hindu nke obodo Iowa." Nova Religio 13: 81-91.
Maharishi Mahesh Yogi. 1976. Mepụta allọ Ọrụ Kwesịrị Ekwesị: Ọrụ Globalwa Nile. Ugwueke, D.C :: Oge nke akwụkwọ akụkọ.
"Mmezu nke Maharishi." Nweta site na http://www.maharishiindia.org/maharishi/maharishi_achievements.html na 10 April 2013.
"Maharishi Mmetụta." Nweta site na http://www.mum.edu/m_effect/ na 4 April 2013.
Mmemme Maharishi. ” Nweta site na
http://maharishi-programmes.globalgoodnews.com/vedic-music/index.html na 5 April 2013.
Olson, Helena na Olsen, Ronald. 2005. Onye Nsọ Ya Maharishi Mahesh Yogi: Onye di ndu nke Millennium ohuru. New Delhi: Akwụkwọ Ọhụrụ Ọhụrụ.
Orsatte, Mario. 2012. "Blog ntụgharị uche Transcendental," Jenụwarị 21. Nweta site na http://www.tm.org/blog/video/dlf-la/ na 2 April 2013.
Ray, Shantanu Guha. 2012. "Ndị na-eso ụzọ Yogi na-akwado ihe nketa ya." India Taa, June 23. Nweta site na http://indiatoday.intoday.in/story/maharishi-mahesh-yogi-rs-60000-crore-fortune/1/201925.html na 10 April 2013.
"SRM-Incorporation." Nweta site na http://minet.org/Documents/srm-incorporation na 2 April 2013.
Stark, Rodney na Bainbridge, William Sims. 1985. Ọdịnihu nke Okpukpe: Nzuzo, Revival na Usoro Okpukpe. Berkeley: Mahadum California Press.
"Ihe dị iche iche na-apụta site na Omume nke Ntụgharị Uche: An Empirical Analysis of Pathogenic Structures dị ka Enyemaka na Ndụmọdụ. ” 1980. Bensheim, Germany: Institutelọ Ọrụ Maka Ndị Ntorobịa na Society. Nweta site na http://minet.org/www.trancenet.net/research/toc.shtml na 20 April 2013.
Williamson, Lola. 2010. Na-aga n'ihu na America: Ntugharị Na-atụgharị Uche nke Hindu Dị Ka Okpukpe Ọhụrụ. New York: NYU Pịa